Home SOUTH AMERICA FOOTBALL CORRADA Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee Argentine Nicolas Otamendi Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography'
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee difaaca kubadda cagta ee Genius oo ugu fiican ee loo yaqaan Nickname; 'Guud'. Our Nicolas Otamendi Storyhood Plus oo lagu daray Xogta Biography Factory waxay kuu keenaysaa xisaab buuxa oo munaasabado la taaban karo ah laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqeyntu waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor caan, nolosha qoyska, nolosha xidhiidhka iyo waxyaabo badan oo caddayn ah oo aan la ogeyn oo ku saabsan isaga.
Haa, qof kastaa wuu ogyahay awoodiisa difaaciisa, laakiin qaar ka mid ah tixgelinta Nicolas Otamendi's Biography oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, aynu bilaabi.
Nicolas Otamendi Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka looyaqaan -Nolosha Hore
Nikolás Hernán Gonzalo Otamendi waxay ku dhalatay Maalintii 12 ee February 1988, Buenos Aires, Argentina. Wuxuu yahay Aquarius markii uu dhasho. Waxa uu ku dhashay Wadanka Argentine Mr Mr iyo Mrs Hernan Otamendi.
Nicolas wuxuu ku koray El Talar, xaafad yar oo ku taal Buenos Aires, Argentina. Wuxuu ahaa mid aad u tayo badan sida cunug. Xaqiiqdii, Otamendi kala qaybisay waqtigiisa kubbadda cagta iyo feerka dhalinyarada. Isagoo koraya, wuxuu wadaagay waqtigiisa u dhexeeya kubbadda cagta iyo kubadda cagta, isaga oo dhisaya awoodiisa jimicsiga maxaliga ah adeerkiis inta uusan go'aansan in uu ku dheelo dhamaan tamartiisa kubada cagta.
Nicolas wuxuu bilaabay noloshiisa kubada cagta ee kooxdiisii ​​Argentine, Velez Sarsfield. Wuxuu ku qaatay sanadaha 12 midabada midabtakoorka ah ee dhalinyarada iyo kooxaha waaweyn. Kadibna, wuxuu si cad ugu raaxeystay gurigiisa carruurnimadiisa. Xitaa markii uu isku dayay boos joogto ah ee kooxda koowaad, Nicolas ayaa weli ku noolaa guriga isaga oo aabihiis iyo hooyadiis.
Nicolas Otamendi Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka looyaqaan -Kusoo caan bax
Ka dib markii uu soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah Koobkii Adduunka ee 2010 ee South Africa, waxaa Porto la wareegtay bishii August ee sannadkaas. Kadib labo xilli ciyaareed oo guulo ah, ku guuleystay Koobka Europa League iyo Portugal, Valencia waxay bixisay € 12m ee Otamendi. Kooxda Isbaanishka ayaa ku dagaalameysay kooxaha Chelsea, Barcelona iyo AC Milan. Man City ayaa fursad u heshay markii Otamendi mar uu diiday inuu tababarto ama la ciyaaro Valencia. Waxay ku dhajiyeen oo waxay u saxiixeen guud ahaan £ 28.5 million. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Nicolas Otamendi Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka looyaqaan -Nolosha Xiriirka
Nicolas Otamendi wuxuu guursaday caruurnimadiisa caruurnimada. Mar uu la arkay xaaskiisa oo u socdaalay makhaayad ku taal bartamaha magaalada.
Ma uusan u muuqan mid ku faraxsan sawirada hoose. Malaha maxaa yeelay Pep Guardiola isaga ka tagay kulan muhiim ah.
Labaduba waxay leeyihiin wiil ilmo ah, oo u eg sida aabihiis.
Nicolas Otamendi ayaa sidoo kale la ogyahay inay haysato carruur kale oo faahfaahinta loo haysto shakhsi ahaan.
Nicolas Otamendi Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka looyaqaan -Habka Milatariga
Mid ka mid ah naanaysta Otamendi ayaa ah General, isaga oo caan ku ah dabaaldegga himiladiisa oo uu ku salaamayo taageerayaasha.
Nicolas Otamendi ee naanaysta magaca dhabta ah
Waxa kale oo loo yaqaan El Mohicano. Ninkani wuxuu la xidhiidhaa gadhkiisa.
Nicolas Otamendi Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka looyaqaan -Daaqada
Nicolas wuxuu hadda ku jiraa kan ugu sarreeya dagaalka gadhka. Lionel Messi ayaa qirtay in gadhkiisa uu gacan ka geysanayo inuu gacan ka geysto muuqaalkiisa adag ee xariifka ah.
Inkastoo uusan qalad aheyn, way cadahay wakhti badan, dadaaladiina waxay u socotaa hagaajinta iyo qaabaynta timaheeda wajiga, taas oo ay weheliso timo casri ah, oo aan ka tegin isaga oo eegaya meel.
Nicolas Otamendi - King of the Beard
In uu erayada ..'Waxaan bilaabay in aan kor u qaado gadhka Valencia oo kaliya waan jeclahay, sidaas darteed tan iyo markaas, waxay noqotay qayb weyn oo ka mid ah shakhsiyadeyda. "
Run ahaantii, gadhka Otamendi ee qeexaya aragtidiisa adag ayaa keentay dhowr tageerooyin badan oo uu ku qaatay xirfadiisa. Tusaale ka mid ah taakuleeynta guuleysata ayaa hoosta lagu arkay.
Markuu riwaayadiisu u muuqato inuu ku guulaysto tartankiisa
Tusaale ahaan sawirka gogolka ah ee la duubay ayaa lagu arkay hoos;
Nicolas Otamendi Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka looyaqaan -Tattoo
Nicolas Otamendi Tattoo Xaqiiqooyin
Otamendi wuxuu lahaa tattoo ugu horeysay markii uu ahaa 14. Maanta, wuxuu leeyahay dad badan, mid waliba muhiima. In uu erayada "Walaalkay iyo mcarruur, aabahay, hooyaday, ugu danbeyn, wejiga awoowe ayaa ku jira jidhkayga. Ilaa dcunay, Haddii aniga seNaqshadeynta indhahayga oo indhahayga soo qabta, waan u tegi doonaa. "
Nicolas Otamendi Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka looyaqaan -Cunsurka Argentine
Xiriirka Otamendi ee kooxda Manchester City ayaa waxaa loola jeedaa in Argentina loo aqoonsado mid ka mid ah xulalka ugu wanaagsan ee soo mara kooxda City.
Daafaca dhexe ayaa noqday ciyaaryahanka lixaad ee reer Argentine inuu booskiisa ka soo galo qolka labiska ee Etihad. Mar uu shaaca ka qaaday in ninka ay isku wadanka yihiin Sergio Aguero inuu ka mid yahay qodobbada ugu muhiimsan ee go'aankiisa ahaa inuu ku biiro Valencia. Waxa uu shaaca ka qaaday: "Tan iyo markii aan la hadlay Aguero intii lagu jiray Copa America, xiisaha ka yimid City marwalba waa mid soo jiidasho leh."
Nicolas Otamendi Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka looyaqaan -Wakhtiyada dhalashada maalinta dhalashada
Otamendi waxay la wadaagtaa dhalashadeeda oo leh tirooyin muuqaal ah oo ka soo horeeyay, oo ay ku jiraan Charles Darwin iyo Abraham Lincoln. Dhawaanahan, Jesse Spencer iyo Josh Brolin ayaa sidoo kale shumaca shumaca ku shubaya isla maalintaas sida Nicolas.
Nicolas Otamendi Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka looyaqaan -Diiwaanka Spoiler
Otamendi waa shaki la'aan, waa rikoodh. Markii ugu horeysay, Real Madrid ayaa ku raaxeysaneysa rikoorkeeda, taasoo ka dhigan tahay 22 oo ku guuleysatay isku xigta, illaa iyo markii kooxda horyaalka La Liga ay ka hor timid guud ahaan Nicolas Otamendi. Waxay ahayd Cristiano Ronaldo waxa uu furay goolasha, lakiin Valencia ayaa ku guuleysatay inay barbareeyso, islamarkaana aysan waqti dheer ku dhicin, 6ft General ayaa kubadda u rogay inay goolka madaxiisa ku dhaliso.
Taas ayaa keentay in guul darradii ugu badneyd ee Real Madrid ay ku dhameysato afar bilood.
Nicolas Otamendi Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka looyaqaan -Nolosha Qoyska
Nicolas Otamendi waxa uu ka soo jeedaa qoyskii qowmiyadaha heerka dhexe ee aabihiis. Xaaladooda asalka ah ee qoysku waxay kor u kacday maalgashiga kubbadda cagta.
Labada waalid ee Mr iyo Mrs Hernan Otamendi ayaa ku nool caasimadda Argentina ee Buenos Aires. Nicolas Otamendi ayaa la sheegay inay aad ugu dhowdahay hooyadiis.
Nicolas Otamendi Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka looyaqaan -Idol
Nicolas Otamandi idol waa qof kale oo aan ahayn Roberto Ayala.
Markii Otamendi uu noqday xulkii Argentina ee Koobka Adduunka ee 2010, wuxuu markii hore bilaabay inuu barbardhigo isbarbardhigga ciyaaryahanka Roberto Ayala, oo sameeyay qarni qarniyaal ah oo loogu talagalay La Albiceleste. Daafaca halyeeyga ah (Ayala) todobo sano ku qaatay Valencia oo u dhaxeysay 2000 iyo 2007. Tani waxay ahayd mid ku caawiyay in uu ku dhiirrado wiilkiisa yar (Nicolas Otamendi) inuu ku biiro kooxda 2014.
Nicolas Otamendi Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka looyaqaan -Ninka isku dhejisan
General wuxuu jecel yahay inuu isticmaalo kabaha isku dhafka ah si uu u kordhiyo qaabkiisa iyo dib u soo kabashada ka timaadda cadaadiska iyo dhaawaca.
Kabahaas waxaa sidoo kale loogu talagalay in ay ka caawiyaan cayaaraha si loo xoojiyo kobcinta ka dib iyo kordhinta wareegga dhiigga.
Nicolas Otamendi Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka looyaqaan -Personality
Nicolas Otamendi waa Aquarius markay dhalatay. Waxa uu leeyahay astaamaha soo socda oo ku xiran shakhsigiisa.
Nicolas Otamendi Awoodda: Waa horumar, asal, madax banaan iyo bini'aadanimo.
Nicolas Otamendi ee Zakada: Wuxuu ka shaqeeyaa dareenka shucuurta, dabeecadda, adkaanta iyo maqnaanshaha.
Maxaa Nicolas Otamendi jecel yahay: Ku farxi saaxiibbada, caawinta dadka kale, loola dagaallamo sababaha, wada sheekeysiga dhinaca garashada, dhegeyste wanaagsan
Maxay Nicolas Otamendi necbayd: Xaddidnaanta, ballanqaadka jebiya, oo cidlo ah, xaalado caajis ah ama xaalado caajis ah, dadka aan ku raacsaneyn iyaga
Waad ku mahadsantahay akhrinta sheekada Nicolas Otamendi ee Sheekooyinka Carruurnimada iyo xaqiiqooyinka aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku habboonayn qodobkan, fadlan ku qor faalladaada ama nala soo xiriir!
Javier Pastore Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta
Lionel Messi Story Story Sheekooyinka dhabta ah ee sheekooyinka